China Steam & Air Retort ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Dingtaisheng
Usoro nhazi usoro (**** sistemụ) nke DTS mepụtara nwere ruo usoro 12 nke njikwa okpomọkụ, yana enwere ike ịhọrọ usoro ma ọ bụ linearity dịka ngwaahịa dị iche iche na usoro nhazi usoro kpo oku, nke mere na nkwụghachi na nkwụsi ike dị n'etiti ogbe nke ngwaahịa na-abawanye oke, enwere ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ n'ime ± 0.3 ℃.
Enweghị mkpa ikpo ọkụ ndị ọzọ (dị ka mmiri ọkụ), ọnụego kpo oku dị oke ọsọ.
Ogwe njikwa nrụgide (**** sistemụ) nke DTS mepụtara na-aga n'ihu na-agbanwe nrụgide n'ime usoro dum iji gbanwee mgbanwe nrụgide nke ngwugwu ngwaahịa ahụ, nke mere na a gbanwere ogo nke nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa, n'agbanyeghị agbanyeghị agbanwe agbanwe akpa nke kom kom, akpa aluminom ma ọ bụ karama plastik, igbe plastik ma ọ bụ ihe mgbanwe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịdị mfe afọ ojuju, enwere ike ịchịkwa nrụgide n'ime ± 0.05Bar.
> A na-ekpo ọkụ uzuoku ozugbo, ọ dịghị mkpa ọpụpụ, yana ụfụfụ ọkụ kachasị.
Usoro a dabere na kpo oku ọkụ maka nkwakọ ngwaahịa nri site na uzuoku, na-enweghị usoro mgbasa ozi ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ, a na-eji usoro ịgba mmiri eme ihe dị ka etiti dị n'etiti). Ebe ọ bụ na onye ofufe dị ike na-eme ka uzuoku na-agagharị iji mepụta okirikiri, uzuoku ahụ dị n'otu. Ndị na-akwado nwere ike ime ka mgbanwe ọkụ ọkụ dị na ngwa ngwa na nri nri.
N'ime usoro a dum, ihe omume a na-achịkwa nrụgide dị n'ime mgbagha ahụ site na inye nri ma ọ bụ iwepu ikuku agbakọtara site na valvụ akpaka na mgbagha. N'ihi uzuoku na ikuku ikuku nke ikuku, nsogbu a adighi emetuta okpomoku, enwere ike idozi nsogbu a kpamkpam dika nkwakọ ngwaahịa di iche iche, na-eme ka akụrụngwa a na-adaba adaba (mpịakọta atọ, akpa abụọ) , Na-agbanwe akpa ngwugwu, karama iko, plastic plastic etc.).
Ọdịdị nke nkesa okpomọkụ na nlọghachi bụ +/- 0.3 ℃, a na-achịkwa nrụgide na 0.05Bar.
Ngwungwu casing ngwugwu Akpa uwe na-agbanwe agbanwe
Ngwa nri ara ehi: kom kom; karama plastic, iko; akpa nkwakọ akpa
Akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi (mushrooms, akwụkwọ nri, agwa): kom kom; akpa nkwakọ ngwaahịa; Tetra chegharịa
Nri umuaka: kom kom; akpa nkwakọ akpa
Nke gara aga: Direct Steam Mgbagha
Osote: Pilot Retort
Igwe ikuku igwe ikuku
Air Steam ogbe Retort
Air Steam ogbe Retort Canner Machine
Ikuku Steam Retort Machine